Khasaaraha ka dhashay Weerarkii madaafiicda Xerada Xalane oo lahelay [Sawirro].
Wednesday March 10, 2021 - 11:38:06 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerarkii madaafiicda ahaa ee Al Shabaab ay shalay ku qaadeen xerada Xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada shisheeye ay uga suganyihiin Soomaaliya.
Saraakiisha UN-ka ayaa sheegay in madaafiicdu ay ku dhaceen gudaha xerada ayna geysteen khasaaro isugu jira dhaawacyo iyo burbur hantiyadeed.
Taliska AMISOM ayaa sheegay in laba kamid ah ciidamadooda ay ku dhaawacmeen madaafiicda kuwaas oo kasoo jeeda dowladda Uganda.
Sawirro lagasoo qaaday goobta ay wax dhaceen ayaa muujinayay madaafiicda oo waxyeellaysay gaadiid iyo xafiisyo ay ku shaqeynayeen ajaanibta gummeysata Soomaaliya ee ku sugan Xalane.
Weerarkii shalay dharaar cad lagu qaaday xerada Xalane ayaa banaanka soo dhigaya awoodda jihaadiga Soomaaliya iyo fashilka ku habsaday ciidamada shisheeyaha Jinsiyadaha kala duwan leh iyo laamaha ammaanka Dowladda Federaalka.
Allaahu Akbar: Magaalada Kaabuul oo ku dhacday gacanta ciidamada Imaarada Islaamiga ah [Sawirro].
17 bilood kadib Weerarkii Manda Bay Golaha Congresska Mareykanka oo aan xog ka helin taliska AFRICOM.